Fatty chiropa hepatosis - kurapwa kwemishonga
Fatty chiropa hepatosis - chimwe chezvirwere zvisingawanzogadzikana zvemuviri, umo masero ayo anoshandurwa kuva connective (scar scar tissue), kurasikirwa nebasa racho. Icho chisingaiti chechirwere chinokonzerwa nekusagadzikana kwemagetsi kushandiswa kwemasero, zvichiita kuti kuwedzerwa kwemafuta acids mu hepatocytes. Kazhinji kacho, mafuta ane hutachiona anokanganisa vanhu vanotambura nehuwandu hwehutano hwehuviri, chirwere cheshuga, vanodhakwa newaini uye vanonamatira zvakashata zvinomera.
Kuvhiringidzika kwechirwere ichi chiri muchokwadi chokuti kwenguva refu hairatidze chero zviratidzo zvekliniki uye inogona kuonekwa mumatangiro ekutanga chete kuburikidza nenzira dzekushandisa uye kuongororwa kwema laboratori. Saka, kazhinji inorwara mafuta hepatosis yechipiri chechipiri kana chechitatu, inoratidzwa nekurwiswa kwekutsvaira, kurwadziwa uye kusagadzikana mu hypochondrium yakarurama, kuputsa kwechigaro, kuputika paganda, kuderera kwemaonero ekuona, nezvimwewo.
Nzira yekurapa mafuta echiropa hepatosis nemishonga?
Chirwere chakakomba chemafuta chiropa hepatosis chinosanganisira kushandiswa kwemapiritsi, uye pakuonekwa kwezvipembenene zvakakomba - zvinodhaka mujenjeni fomu. Chiito chemishonga inonyanya kupiwa kuti kurapwa kwemafuta ane hepatosis inotarirwa kubvisa zvikonzero zvinokonzera chirwere, zvinogadzirisa zvirongwa zvemagetsi mumuviri, kudzorera masero eropa uye mabasa ayo. Semitemo, chirwere chinotora nguva refu chinodiwa.
Mishonga yemafuta echiropa hepatosis inogona kusanganisira kushandiswa kwemishonga inotevera:
Cholesterol anti-cholesterol madawa ekururamisa lipid metabolism, iyo inobatsira kuderera kwehuwandu hwemafuta mumuviri (kusanganisira chiropa tishu), uyewo kunonoka kukura kwemasero epachiviri (Vazilip, Atoris, Krestor, nezvimwewo).
Vasodilator inovandudza microcirculation uye zvinokonzerwa neropa, izvo zvinogadzirisa zvirongwa zvemagetsi, kutakura kwezvimiti uye oksijeni mumasukisi, pamwe chete nekugadzirwa kwemishonga yemagetsi uye chepfu (Trental, Curantil, Vasonite, etc.).
Zvinoreva kuti kunatsiridza basa remagetsi - vitamini B12 , folic acid.
Zvinonyanya kukosha phospholipid (Essentiale, Essler zvakasimba, Phosphogliv, nezvimwewo) zvinodhaka zvine utachiona hunokonzerwa nehuputi, hunoita kuti kudzorerwa kwemasero eropa akanganisa, kushandise mafungiro emagetsi mukati mavo, uyewo zvinoita kuti kuwedzerwa kwekuchengetedzwa kwemasero eropa kuzvinhu zvinokuvadza uye kuora kwavo.
Sulfamic amino acids (Methionine, Heptral, Taurine, nezvimwewo) inonzi antioxidant agents inokurudzira kupindirana kwephospholipid mumuviri, iyo inowedzera kuwedzera ropa rinoputika, inobvisa mafuta akawandisa kubva hepatocytes, kuderedza visiketi ye bile uye kuisa mararodhydrate metabolism.
Ursodeoxycholic acid (Ursosan, Livedaxa, Ursofalk, nezvimwe) is bile acid, iyo ine hepatoprotective, choleretic, immunomodulating, hypocholesterolemic uye antifibrotic properties.
Maitiro enzyme (Pansinorm, Festal, Creon , nezvimwewo) mishonga inovandudza zvirongwa zvekudya uye kubvisa zviratidzo zvakadai sokunyunyutira, kubhenekera, kugadzikana kwezvigaro, nezvimwewo.
Mishonga yehupenyu hwe hepatosis inogadzwa somunhu mumwe nomumwe, achifunga nezvehuwandu hwekuvadzwa kwechiropa, zvinokonzerwa nehutachiona uye zvinetso zvakasiyana. Hatifaniri kukanganwa kuti kuburikidza nemubatsiro wemishonga chete asi hazvizokwanisi kuporesa - zvakakosha kubatana nechikafu chakanaka, kurongedza basa remuviri, kusiya tsika dzakaipa.
Bacteriophages - Species uye chinangwa
Zviratidzo zvezvipembenene mumuviri womunhu
Chirwere chisingaitiki gastritis
Indigestion - zviratidzo
Chlorhexidine Bigluconate - shandisa
Radiculitis - zviratidzo uye kurapa kumba
Psoriasis - danho rekutanga
Nzira yekubvisa minyepi kumba?
Jabhoti pabhandi rejusi
Rosehip - kudyara uye kutarisira
Vitriol yechiramu inopesana ne mold
Vitafel kune makate
Zinerit kubva pachigamba
Soup gazpacho kumba - kamukira
Chloe Kardashian ane pamuviri ane mhosva pamberi pevanyori kuti vadzidziswe zvakasimba
Runny nose panguva yekuzvitakura - 2 trimester
Nzira ipi yekurasikirwa uremu mukutsanya?
Kuvhiringidzika kwepamuviri - kurapa
Insiders vakataura nezvekuparadzanisa kwaAna Faris naChris Pratt
Mhemberero dzeMutsva mutsva mangwanani mugereji - junior boka
Mhumbu inokura kwemakore mangani?
Leopard shorts - 12 photos of slender female images in shoes with leopard print
10 Nyeredzi dzeHollywood dzakabatwa zvisina kunaka nekushungurudza zvepabonde
Hanzvadzi Megan Markle vakawana njodzi pamusana peparazzi
Itai kuti zvipfeke
Pumpkin cream - dessert yose uye yakashata
Julien - kamukira
Inokurumidza sei kupisa zuva muchiteshi chezuva?